बजेट अभावले निर्माणाधीन कोल्डस्टोर ३ वर्षदेखि अलपत्र
कात्तिक २५, पर्वत । किसानको उत्पादन बाह्रै महीना संकलन गरी बजार पठाउने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको चिस्यान केन्द्र अलपत्र परेको छ । मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरको पातीचौरमा निर्माणाधीन चिस्यानकेन्द्र तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । गाउँपालिकाले भने रू. पाँच करोड लागत मूल्यांकन गरेको निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र अलपत्र छाडेर अर्को नयाँ बनाउने तयारी थालेको छ ।
जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको आलु, सुन्तला, तरकारी, खाद्यान्नलगायत स्टोर गर्ने योजनाअनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पालामा ०७३/०७४ मा निर्माण थालिएको थियो । कोल्डस्टोर बनाउन मोदी–२ देउपुरका खेमबहादुर हमालले जग्गा दिएपछि तत्काल पाँच आना जग्गामा भवन निर्माण शुरु गरिएको हो । निर्माण समितिका अध्यक्ष गङ्गा तिमिल्सिनाका अनुसार शुरुको वर्ष रू. ५० लाख विनियोजन भए पनि २४ लाख बजेट आयो । ‘बजेट विनियोजन भएपछि काम थाल्यौँ, उनले भने, ‘लागत मूल्यांकनअनुसार बजेट नआएपछि काम अघि बढेन । अपुग बजेट माग्ने दबाब पुगेन ।’ दुईतले चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम एक वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम गर्न बजेट अभाव भएपछि निर्माणकै क्रममा एक ढलान गरिएपछि अलपत्र छ ।
देउपुर जिल्लामै धेरै सुन्तला उत्पादन हुनेमा दोस्रो गाउँ हो । यहाँ वर्षेनी तीन करोडको सुन्तला उत्पादन हुन्छ । मौसममा रू. ३० देखि ४० प्रतिकिलोका दरले विक्री गर्नुपर्ने सुन्तला चैतसम्म राख्नसके १५० मा विक्री हुने किसानले बताएका छन् ।
विज्ञले कोल्डस्टोरको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी भवन निर्माण भएकाले सम्पन्न हुन समस्या देखिएको बताउँछन् । कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतका प्रमुख एवं कृषि विज्ञ वासुदेव रेग्मीले भवनको क्षेत्रफलअनुसार क्षमता कम हुने बताए । रासस
पोखरा महानगरपालिकाले उद्दार गर्‍यो ३० सडक बालबालिका[२०७६ चैत, १७]
पोखराका सबै वडामा समन्वय समिति गठन [२०७६ चैत, १६]
बुवाआमालाई भेटेर फर्केकि थिइन् कोरोना संक्रमित १७ वर्षीय किशोरी[२०७६ चैत, १५]
पोखराका पर्यटक कोही फर्कंर्दै, कोही प्रतीक्षामा [२०७६ चैत, १४]
पोखरा महानगरपालिकाले उद्दार गर्‍यो ३० सडक बालबालिका